Guddiyada Joogtada ee Golaha Shacabka iyo Baarlamaanka Puntland oo isweydaaranaya aqoontooda dowladnimada – Kalfadhi
Guddiga Joogtada ee Golaha Shacabka ayaa maanta waxa uu kulan aqoon-isweydaarsi ah kula leeyahay Xarunta Filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho Guddiga Joogtada ah ee Golaha Wakiillada Puntland. Kulankan ayaa imaanaya maalmo kadib markii uu dhawaan Garoowe ku soo dhamaaday shir ay halkaas uga qeyb-galeen inta badan Baarlamaannada Dowlad Goboleedyada.
Sida uu Xafiiska Warfaafinta ee Golaha Shacabku baahiyey, waxa uu Guddiga Joogtada ah ee Golaha Shacabku dhageysan doonaan fahamka, waaya-aragnimada iyo xirfaddooda dowladnimada Xubnaha ka socda Baarlamaanka Puntland, iyada oo uu dhinaca kale Golaha Shacabkuna u soo bandhigi doono Baarlamaanka Puntland qaaciddooyin lagu hormarin karo dowladnimada Soomaaliya.
Kulanka waxa uu furmay shalay, waxaana uu Golaha Shacanku shaaciyey inuu socon doono ilaa maalinta Khamiista ah, oo ku beegan 3 maalin kadib. Hase ahaatee, waxaa uu kulankan dhacayaa iyada oo uu baaqanayo kii Golaha Shacabka oo aan ilaa Sabtidii la qaban, lamana oga inuu dhici doono Arbacada, maadaama uu kulankan u socda Guddiyada Joogtada ee Golaha Shacabka iyo Wakiillada Puntland gaari doono ilaa Khamiista.
Maxaad fileysaa inuu Bangiga Dhexe ku soo kordhin doono Guddoomiyaha cusub?